स्थायी समिति बैठक स्थगितपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया : गृहकार्य नपुगेकै हो ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more स्थायी समिति बैठक स्थगितपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया : गृहकार्य नपुगेकै हो !
स्थायी समिति बैठक स्थगितपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया : गृहकार्य नपुगेकै हो !
बैशाख २५ गते, २०७७ - १६:२३
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी समिति बैठक स्थगितप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । उनले स्थायी समिति बैठक गृहकार्य नपुगेकै कारण स्थगित भएको बताए ।
बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणपछि बोल्दै उनले स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीसँगको सल्लाहमा छिट्टै बस्ने बताए । प्रचण्डले एक/दुई दिनमै बैठक बोलाउने पनि बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै उनले भने, “अलि गृहकार्य नपुगेकै हो । दुवै अध्यक्षले बैठक एक दुई दिनभित्र बोलाउँछौं ।”
बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न नसकेकाे भन्दै आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएकाे थियाे । स्थगित बैठक कहिले बस्छ भन्ने विषय अनिश्चित छ ।
बैठक अन्यौंल बनिरहेका बेला असन्तुष्ट स्थायी समिति सदस्यले बिहिबार मात्रै बेग्लै भेला गरेका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा गरिएको भेलाबाट स्थायी समिति बैठक तत्काल डाक्न दबाब दिने निर्णय गरिएको छ । भेलामा २० जना पार्टी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
बैशाख २५ गते, २०७७ - १६:२३ मा प्रकाशित